Azonao atao ny mamory ny resaka sasany lalana izay voalaza matetika, raha manana Mpiara-miasa.
inona no ataonao amin’ny faran’ny herinandro. Na hitondra ny resaka momba ny fifandraisana, ny lehilahy, ny fitiavana, ny fihetseham-pony, sns. ny Fototry ny Fanambarana, dia matetika afaka tapa miaraka na dia efa olon-tiany na tsy. Mazava ho azy, dia afaka mangataka azy ireo mivantana, fa efa nanao izany ny marina dia, na oviana na oviana, satria tsy toy ny ao amin’ny karatra view -) — Tsy, ianao dia afaka, araka ny olon-kafa ireto efa voalaza, iray amin’ireo namana vehivavy sakaizany mangataka anao na ny iray amin’ireo buddies fanontaniana. ny ny namana mba hahitana Volt aoka izy, dia tamin’ny iray ny vehivavy sakaizany namana sy Volt fotsy ianao, na dia manana ny olon-tiany. Amin’ny manodidina, ny tovovavy tsara tarehy mipetraka amin’ny izay efa lavo ho ahy somary lava kely. Isaky ny mahita dia mahazo heart palpitations sy hahazo tena sahiran-tsaina. Ho anareo aho fa ho tsara toy ny rivotra sy ny ankehitriny izy dia manana fitia mifamaly ny masony na oviana na oviana, na rehefa afaka izany, mijery izay tena aho manao. Mieritreritra ihany koa aho, raha ny tena marina, izay manana ny azy, tsy Fahafahana amin’ny zavatra rehetra, satria mino aho fa izy no karazana tovovavy izay semi-mahery, fa ny karazana amin’ny vola ao an-paosy, ary tsy azoko mihitsy izany. Izaho mahafantatra fa mihoatra noho ny tsy mety tsy tonga, fa izaho kosa tsy matoky ahy anao ny adiresy. Ary ahoana raha tena misy ny ‘tsia’. Aho mahita azy ireo tsy tapaka sy avy eo dia afaka manana izany na aiza na aiza izay milaza ho tena mahamenatra. Afaka manome ahy ny soso-kevitra sasany ny fomba afaka hiatrika tsara kokoa. Aho hanao izany nandritra ny herinandro fantatro ny ankizivavy izy tiorka sy tena mafana^^ ny Olana dia nataoko omaly izy dia manana ny olon-tiany: (ary raha sambany aho nahita ny tenako tao anatin’ny fotoana anao amin’ny fitiavana fantatro ianao satria ny herinandro dia miasa ao amin’ny samy maka izay tiany, ary ny dadatoany no namana miaraka amin’ny Mpampiasa ny toeram-pivarotana, ary indraindray isika no tao, ary avy eo dia nipetraka teo amin’ny latabatra, Izaho Mena olana indraindray ka misy foana ny zavatra mitranga ao ary toy izany koa indraindray izy manao ny sandriny teo an-tsoroko, ary koa) efa ny ahiahy dia ny miara-miasa amin’ny samy maka izay tiany, ny karazana toy ny bar, ary izany no mahatonga ahy hieritreritra ny Volt no mahatonga ny rehetra ny vahiny, na dia mety ho izay tsy niteraka, aho mbola tsy niteny hoe tiako ianao satria ianao dia manana namana iray izay, inona no za-draharaha omaly manana ny fanontaniana dia ankehitriny, ny azo atao ny amin’ny ho ahy, ary izy ireo ho Volt faritra mety dia miaraka amin’ny namana izay atao manontany ny daty aho sao hahazo ny fahatsapana ny zavatra momba ahy, na Volt. Eto dia ity hafahafa Lahatsary iray Taona toaka, izay ao h metatra ny fanovana efitra firaisana ara-nofo niaraka tamin’ny Taona namana ankehitriny ny miteny alemana ampahany Eoropa. Mazava ho azy, ny namany naka sary ny zava-drehetra, ny tavany tsy nahita, ary mbola bebe kokoa ny mandefa. Ny ratsy indrindra dia ny hoe ny tovovavy ankehitriny ny bevohoka sy ny Zaza tsy manana na inona na inona Tsara mba hataony noho ny manao izay mahafinaritra azy ireo. Izaho miaina ao anatin’ny Bavarian an-tanàna, ary ny olona rehetra avy ny sekoly dia nahita ity Lahatsary ity. Mihevitra aho fa izany no tena ratsy indrindra Endriky ny fampijaliana an-tserasera. Ahy tezitra fa ny olona rehetra dia manao hoe ny fomba adala ny zazavavy, efa tsara ny iray izay namelatra ny Horonan-tsary. Tena tsy te, fa ity Lahatsary ity dia nampiasaina be kokoa. Tsy fantatro ny ankizivavy, fa miala tsiny aho total. Ahoana no hanakanana ny Fihanaky ny Horonan-tsary. Izao amin’ny rehetra azo atao, satria ‘ny zavatra indray mandeha eo amin’ny Aterineto, dia mijanona any’. Fotsiny aho te-hanao zavatra manohitra ny Fampijaliana izay tovovavy mahantra. Ny ankizivavy dia somary tsara tarehy, izaho sy ianao. Fantatsika antsika amin’ny mitraka ary izy nitsiky tamiko matetika, rehefa mahita antsika, izay mbola tena nahatsikaritra. Ny hany Olana dia tsy ny hoe olona iray manoratra ao ny raharaha ny farany girl (matetika ny ankizivavy izay tsy niasa tany aloha), ary aho ankehitriny kely Diniho, na dia mety ho kely kokoa ny adala, dia hanoratra toy izany. Amin’ny Antoko antso mba ho tsara kokoa fa ankehitriny dia Ririnina, ary misy inona no tena mandeha na aiza na aiza. Mihevitra izany, dia tokony hanoratra indray ary raha toa ka tonga mba mampihomehy, raha toa aho handefa mailaka anao fotsiny izany.
Fantatro, adala fanontaniana
Fa izay manao ny — Tanana avy eo. Ara-dalàna miaraka amin’ny oroka sy intsony ny oroka. Aho tovovavy, inona no tokony hataoko raha ny olon-tiany nanoroka ahy tsy ho ela. Aiza aho no tokony hametraka ny tànany misy. Avy eo dia eo an-dohany. Tiako ny ankizivavy, raha ny marina aho Gur, fa amin’izao fotoana izao namana, rehefa nahita azy ireo aho, dia tsy azo antoka raha toa izy ireo miara-ao amin’ny toerana voalohany, satria tsy manana nanoroka natao tanana, fa net na ny toy izany. Tiako ny manontany tena isika raha toa ka na inona orinasa afaka fa ankehitriny fantatro net aho raha toa ka manana fanontaniana, raha toa ianao ka ny namana. Aho dia efa niaiky ny fihetseham-po ho azy, fa ny mihoatra dia hafahafa. Ary amin’ny whatsapp aho te-hanao ny net. Indrisy anefa aho tsy za-draharaha ao amin’ny faritra ihany koa (ny namako voalohany sy afa-tsy lehilahy iray eo amin’ny fiainako), noho izany dia mila manontany izany fanontaniana izany, na dia tokony ho omby intsony ny taona izay iray manontany izany fanontaniana izany, tsikelikely. -) Inona no mahatonga manadala ankizilahy. Ny tiako holazaina, dia Fitia tsy mazava hamantatra izany eo anatrehan ny namana. Ohatra, tamim-bazivazy hoe: ‘rahoviana no namanao, satria amin’ny mazava ho azy indray. Avy eo isika dia tsy tokony hatahotra izay ho avy an-trano tany am-boalohany sy ny tratra antsika’ ary ny firaisana ara-nofo innuendo. Na dia izany fotsiny Rumalberei. Ary mpanadala amin’ny olombelona afa-tsy amin ny vehivavy ianao dia hahita tsara tarehy. Na izany na inona na inona mba hanao izany. Ny namany (lehilahy sy vehivavy) mpanadala amin’ny tsirairay indray mandeha. Aho namana ny ankizivavy fotoana vitsy lasa izay, mega tsara (efa mega be ny milaza amintsika, ankoatra ny zavatra hafa, ka iza moa ve isika hahita ny tsara), ary avy eo dia tapaka eny fifandraisana. Araka ny voalaza, tsy azony avy amin’ny rainy, ao ny raharaha ny antso sy hafatra izany dia hanoratra toy izany koa. Izao no lasa hatramin’ny avy eo, ka ny volana. Fety dia eny isika ary mahita antsika isan’andro (izy ao amin’ny kilasy). Aho nanao ny raharaha manontolo izao ary te hanana zavatra hatao aminy, na inona na inona intsony, izy dia manana ahy matetika nandainga sy ny fotoana dia mbola tsy natao, na dia izany foana nifindra tampoka, na fotsiny hoe na inona na inona. Na izany aza, tsy dia Fantatro izao ny antony tsy nopotehina intsony ny mifandray, sy ny fihetsiny manoloana ahy.
Efa nanao zavatra ratsy
Ahoana no hanontany anareo fanontaniana iray ankehitriny, na dia tokony aho na hanontany azy. Izaho te-handeha amin’ny ankizivavy amin’ny filma fa ny Olana dia manana ny olon-tiany sy tsy fantatro ankehitriny aho raha tokony manontany fotsiny, na raha toa izany no mampihomehy, satria izy dia manana ny olon-tiany. Na izany aza, dia mahita ny namana dia tena tsy fahita firy ary tsy fantatro raha toa izy na dia mbola sambatra eo amin’ny fifandraisana. Ary tsy manana ny fahatsapana aho dia raiki-pitia ahy tsikelikely tao aminao. Noho izany aho dia efa ela ao amin’ny ankizivavy, ny iray kilasy no momba ahy, satria aho avy ao amin’ny sekoly an-tsitrapo teo. Izy tanora kokoa noho izaho, ary mega tsara tarehy. Na izany aza, dia tsy nanana namana. Izy dia tsara fanahy, mampihomehy, foana amin’ny tsara ny toe-po ary tsy misy Fuck Zazavavy. Mahafantatra isika antsika indrindra avy amin’ny fanatanjahan-tena an-tsekoly, ny firenena an-trano ny roa taona farany, dia izao fa tsy misy»namana». Niezaka aho ho intsony ny tsy fahombiazana mba hahatratra azy, te-hanontany zazavavy hafa ny fomba atao mba ho tanora ho courted. Izany koa no natao ho ny hevitro fa tsikelikely manana fihetseham-po ho ahy, dia nanoroka sahady, ary efa manana ny dingana voalohany sahy, ary natory miara. Ny Olana dia ny tovovavy manana ny olon-tiany, izay an’ny ny mafy-namana fa fantatro afa-tsy hatramin’ny farany. Fa nahoana no te-hanontany anareo aho raha tokony ho foananay ny fifandraisana amin’ny ankizivavy, ny voninahitra sy ny avy ny fanajana ny namana tsara, na ahy, ny fihetseham-po, dia tokony ho mpitari-dalana sy ny fifandraisana handrava mba hamorona ny tovovavy iray vaovao. Miarahaba, izaho dia te-ho rakotra taratasy tovovavy iray avy any am-pianaranay. Afaka mangataka ho toy ny fanontaniana voalohany, na dia manana ny olon-tiany. Ary raha toa ianao ny tena marina dia tsy misy olona manoratra ary manontany ny zavatra hitany ao ny olona tsara tarehy. Manorata amiko na tsara izany na inona dia afaka manao tsaratsara kokoa. Misaotra anao Hey guys, i’m tia ankizivavy iray ary isika hahatakatra ny tsirairay tsara fa izaho kosa mahafantatra fa izy dia manana ny olon-tiany, izay izy, ary tsy te-hino izany izay no mahatonga ahy te mahatakatra izany ny tenako. Ahoana no ahafahako angataho ny ankizivavy iray nandalo fotsiny fa izy dia manana ny olon-tiany. Noho izany, ohatra, Hoe manao ahoana ianao sy ny namanao izany koa fa ny tovovavy nilaza na inona na inona ho ahy, fa izy dia manana ny olon-tiany, noho izany dia te-manana fanontaniana manan-tsaina. Izany dia midika hoe handeha ho zazavavy, dia nanoroka ary ankehitriny aho dia te mba hahafantatra ny zavatra tsapany ho ahy, sa tsy izany fanontaniana ho angataho ny ankizivavy iray mba tsara na araka ny hitanao izao, ny. Aho hianatra fotsiny ny zazavavy kely ‘kokoa mafy’ ho fantatrao (nihaona eo ny ‘sekoly nankany’) ka dia tonga ho antsika, araka ny hevitro, kely akaiky kokoa. Ahoana no ahafahako mahita amin’izao fotoana izao, na dia manana ny olon-tiany na tsy. Fantatro fa, indrisy, tsy misy ny Namana tsy afaka toy izany ny fanontaniana aho. Ahoana no ahafahako mahita ny toy izany. Ny ankizivavy aho ho manana tafasaraka vao haingana avy ny olon-tiany, ka fotsiny aho nahita avy amin’ny buddy. Izy ireo dia miara-dia efa ho herintaona sy tapany. Talohan’ny ianao tonga miaraka, izahay (toy izany koa ny tovovavy ary izaho) no be dia be miaraka, toy izany koa izahay na dia sy ny zava-oroka — izany dia midika fa tiako ny miezaka hanatona azy indray. Izao aho dia te hanontany aho na dia tsy tokony hiandry, tsy ianao (heveriko fa) ‘vaovao’ ankoatra izany, na dia tokony na dia mifandraisa azy indray na miandry mandra-na raha tsy izany. Toy izany koa fa mety mahaliana ahy, indrindra fa ny anjara, raha ianao no mila ankehitriny, na mety ho mandritra ny fotoana voalohany ny fotoana sy ny fomba ela, etc, Efa nisy resaka nifanaovanay tamin’ny herinandro lasa amin’ny tovovavy sy nahatakatra tsara. Ao amin’ny dingana, nanadino ny mangataka ny maro. Ny Oniversite ny ahy fantatry ny ankizivavy, ny adala, raha manoratra aho Fa araka ny isan’ny fanontaniana, ary avy eo
← Maimaim-poana Chatroulette USA Chatroulette aho Chatroulette Online aho ny amin'ny Chat Roulette
Maimaim-POANA Indiana Chat Room an-Tserasera Tsy misy Fisoratana anarana - Indian chat →